Otu esi ede akwụkwọ ma bipụta ya | Akwụkwọ akụkọ
Otu esi ede akwụkwọ na ibipụta ya
Enwere okwu na na ndụ ị ga-eme ihe atọ: ịmụ nwa, kụọ osisi na dee akwụkwọ. Ọtụtụ ndị mmadụ na-agbaso ụlọ atọ ndị a, mana nsogbu adịghị eme ya, ma na-emesịa kụziere nwatakịrị ahụ ihe, lekọta osisi ahụ ma bipụta akwụkwọ. N'akụkụ ikpeazụ a anyị chọrọ ịkwụsị ka ị mara kedu usoro nke esi ede akwụkwọ na ibipụta ya.
Ọ bụrụ na ị na-achọkarị ide ma i mebeghị mkpebi ime otú ahụ, mgbe ahụ, anyị ga-enye gị ihe niile ị ga-eme ka i wee hụ na ọ naghị esiri gị ike ime otú ahụ. Ihe siri ike bụ ịga nke ọma na akwụkwọ ahụ.
1 Ndụmọdụ tupu ịde akwụkwọ na ibipụta ya
2 Nzọụkwụ iji dee akwụkwọ na-ebipụta ya
2.1 Etu esi dee akwukwo
2.1.1 Nwee echiche
2.1.2 Mee edemede
2.1.4 Oge ịlele
2.1.5 Nwee onye na-agụ efu
2.2 Otu esi ebipụta akwụkwọ
2.2.3 Ihe nkpuchi ihu, mkpuchi azụ na spain
Ndụmọdụ tupu ịde akwụkwọ na ibipụta ya
Ọ bụrụ na i lebatụ anya na ahịa mbipụta, ị ga-achọpụta na e nwere ụdị akwụkwọ atọ ị nwere ike ịnweta:
Jiri onye mbipụta bipụta ya, ebe ha na-ahụ maka nhazi, nhazigharị na mbipụta. Ọ nwere uru na ọghọm ya, ebe ọ bụ na ndị na-ebipụta taa abụghị otu dị ka ọ dị na mbụ (maka ha ị bụ nọmba ma ọ bụrụ na ahịa gị dị mma mgbe ahụ ha na-amalite ịṅa ntị karịa gị).
Jiri "editorial" bipụta. Gịnị mere anyị ji etinye ya na nkwuputa okwu? Ọfọn, n'ihi na ha bụ ndị na-ebipụta akwụkwọ ebe ị ga-akwụ ụgwọ ka e bipụta akwụkwọ ahụ. Ha dịkwa ọnụ. Na mgbakwunye, ị ga-akwụ ụgwọ mgbakwunye maka mgbazi, nhazi, wdg. Nke ahụ nwere ike ịpụta na ha na-ana gị 2000 ma ọ bụ 3000 euro maka obere mbipụta.
Biputere onwe ya. Ya bụ, bipụta n'onwe gị. Ee, ọ na-agụnye inwe ịmepụta na mezie onwe gị, ma e wezụga ihe abụọ ahụ, ndị ọzọ nwere ike ịbụ n'efu ebe ọ bụ na e nwere nyiwe dị ka Amazon, Lulu, wdg. nke na-enye gị ohere ibugo akwụkwọ ndị ahụ n'efu ma tinye ha na ere. Na ị na-adịghị etinye ego na-enweta ha na akwụkwọ; Site n'otu nyiwe ndị a ị nwere ike ịtụ akwụkwọ ndị ịchọrọ n'ọnụ ahịa dị ọnụ ala.
Ihe dị mkpa mgbe ị na-ede akwụkwọ abụghị eziokwu nke ibipụta ya, kama nke inwe anụrị na ịnụ ụtọ usoro ahụ, ibi ndụ akụkọ ahụ n'anụ ahụ gị. Eziokwu nke ibipụta ya, na ihe ịga nke ọma ya ma ọ bụ na ọ bụghị, ga-abụrịrị nke abụọ.
Nzọụkwụ iji dee akwụkwọ na-ebipụta ya
A bịa n'ịde akwụkwọ na ibipụta ya, anyị ga-eme ya kewaa ụzọ ụzọ abụọ dị iche iche. Ha abụọ jikọtara ọnụ, ee, mana enweghị ike ịme ha n'otu oge ma ọ bụrụ na emeghị akwụkwọ ahụ nke mbụ, enweghị ike ibipụta ya.
Ide akwụkwọ adịghị mfe ka ọ na-ada. Ị nwere ike inwe nnukwu echiche, nke bụ ihe mbụ ị chọrọ, ma ọ bụrụ na ịmaghị ka esi hazie ya na ka esi agwa ya E wezụga folio ma ọ bụ abụọ, ọ baghị uru nke ukwuu. Ya mere, usoro ị ga-emerịrị iji gbadata n'ọrụ bụ ihe ndị a:
Anyị anaghị ekwu "ezigbo echiche", ọ bụ ezie na nke ahụ ga-adị mma. Ebumnobi ya bụ ya Ị ma ihe ị ga-ede banyere ya, na i nwere nkata nke ihe gaje ime.
Nke a bụ ihe na-arụ ọrụ nke ọma maka m, nke ahụ nwekwara ike nye echiche nke ndọtị nke akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ akwụkwọ ị ga-ede nwere ike inwe. Ma, kpachara anya, nke ahụ agaghị abụ atụmatụ doro anya. Ọ na-adịkarị ka ị na-ede nke a, ọ ga-agbanwe, na-agbakwunye isiakwụkwọ ndị ọzọ, na-agbakọta ndị ọzọ ...
Kedu ụdị ntuziaka ị ga-eme? Ọfọn, ihe yiri ịma ihe na-aga ime n'isiakwụkwọ nke ọ bụla i bu n'obi. Mgbe ahụ akụkọ gị nwere ike weghara ụdị onwe ya ma gbanwee, mana nke ahụ ga-adabere nke ukwuu.
Nzọụkwụ ọzọ bụ ide. Achọghị ọzọ. Ị ga-eme dobe ihe niile ị chere n'ime akwụkwọ na, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, hazie nke ọma ka e wee nwee ike iso akụkọ a ngwa ngwa.
Nke a nwere ike were ebe ọ bụla site na izu ole na ole, ọnwa, ma ọ bụ ọbụna afọ, yabụ adala mbà. Ihe kacha mma i nwere ike ime bụ ide, na-echeghị nke ukwuu banyere otú ọ na-atụgharị. A ga-enwe oge maka nke ahụ. Ebumnuche gị bụ iru okwu "Ngwụsị".
na a na-emegharịkarị ọtụtụ ugboro, Ọ bụghị naanị otu, karịsịa na akwụkwọ ndị mbụ. Ma ọ bụ na ọ bụghị naanị na ị ga-ahụ na mkpoputa ahụ ziri ezi, ma na nkata ahụ siri ike, na ọ dịghị ihe ndị na-adịghị mma, na enweghị nsogbu ma ọ bụ ihe ndị na-adịghị mma, wdg.
Ihe ọtụtụ ndị na-ede akwụkwọ na-eme bụ ikwe ka akwụkwọ ahụ kwụsịtụ obere oge ka, mgbe a bịara n'ịkwalite ya, ọ dị ha ka ọ dị ọhụrụ n'anya ha ma bụrụkwa ebumnobi karị. N'ebe a, ọ ga-adabere na onye ọ bụla ịhọrọ ịhapụ ya ma ọ bụ tinye gị ozugbo ka ị nyochaa.
Nwee onye na-agụ efu
Un Zero reader bụ onye na-agụ akwụkwọ wee nye gị ebumnuche ebumnuche ya, na-akatọ ihe ị dere, na-ajụ onwe gị ajụjụ na ọbụna na-agwa gị akụkụ ndị kasị mma na nke ị kwesịrị inyocha.
Ọ bụ ụdị onye na-enyocha ihe na-eme ka ọ bụrụ na akụkọ ahụ nwere ike ahụ nke na-enye gị ohere ibipụta ya.
Otu esi ebipụta akwụkwọ
Anyị enweelarị akwụkwọ ahụ e dere na a na-eche na ị gaghị emetụ ihe ọ bụla nke akụkọ ihe mere eme nke na-emepụta ya (nke a na nuances, n'ezie). Ya mere ọ bụ oge iche echiche maka ibipụta ya na, maka nke a, usoro ndị ị ga-emerịrị bụ ndị a:
Ọ bụ ezie na n'ime usoro ndị gara aga anyị gwara gị ka ị nyochaa akwụkwọ akụkọ ahụ tupu ibipụta ya, nke bụ eziokwu bụ na ị nwere onye ọkachamara na-agụ akwụkwọ abụghị echiche ọjọọ, nnọọ iche. Ọ bụkwa na onye ahụ ga-enwe nnọọ ebumnobi ma nwee ike ịhụ ihe ndị ị na-aghọtabeghị.
Nzọụkwụ ọzọ bụ ịhazi akwụkwọ ahụ. Ọ na-emekarị mgbe anyị na-ede ihe anyị na-eme ya na usoro A4. Ma Akwụkwọ ndị ahụ dị na A5 ma nwee oke, nkụnye eji isi mee, footers, wdg.
Maka ihe ndị a niile ka ọ dị mma, ịchọrọ ezigbo mmemme (maka ozi, nke a na-ejikarị eme ihe bụ Indesign).
Nke a ga-enye gị ohere ịnweta akwụkwọ kwesịrị ekwesị maka ibipụta n'ụdị akwụkwọ.
Ihe nkpuchi ihu, mkpuchi azụ na spain
Ntinye ego ọzọ ị ga-eme bụ ime ya nwee mkpuchi ihu, mkpuchi azụ na ọkpụkpụ azụ nke akwụkwọ ahụ, ya bụ, akụkụ a na-ahụ anya, na nke nwere ike ịmasị ndị na-agụ akwụkwọ ka ha were akwụkwọ gị gụọ ihe ọ na-ekwu.
Nke a nwere ike ịbụ n'efu (ọ bụrụ na ị na-eji ndebiri) ma ọ bụ kwụọ ụgwọ ma ọ bụrụ na ị rịọ maka ọrụ onye nrụpụta ka o meere gị ya.
N'ikpeazụ, ugbu a na i nwere ya niile, ọ bụ oge biputere. Ma ọ bụ ọ bụghị. Ọ bụrụ na ịchọrọ ka onye mbipụta bipụta ya, mgbe ahụ ị ga-eziga ya chere ka ha zaghachi..
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịwepụta ya n'onwe gị, ya bụ, bipụta ya, naanị ị ga-ahụ nhọrọ. Otu n'ime ndị kasị ahọrọ bụ Amazon, ebe ọ na-efu ihe ọ bụla iji nweta ya.
N'ezie, anyị na-akwado na, Tupu ime nke a, deba aha ọrụ gị na Ngwongwo ọgụgụ isi, ma nweta ISBN ka onye ọ bụla ghara izuru echiche gị.
Ugbu a ịmara ka esi ede akwụkwọ na ibipụta ya, ị nwere ajụjụ ọzọ gbasara ya? Jụọ anyị, anyị ga-aza gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » Otu esi ede akwụkwọ na ibipụta ya